Amathiphu Wokuthwebula Ukufaneleka - Ungayenza Kanjani Inzuzo Yakho Ibukeke Ikulu
Indlela Yokwenza Ukuzuza Kwakho Kubukeke Kukuhle
Ukuthwebula ukuthwebula izithombe kuyindlela enhle yokubonisa umsebenzi owufakile emzimbeni wakho. Noma ngabe ungumakhi womzimba ufuna ukuthwebula incazelo yakho ephelele yemisipha, noma umgqugquzeli we-Instagram ofuna ukubukeka emuhle ezingutsheni zeklayenti lakho, amathiphu alandelayo wokuthwebula izithombe azokusiza ubukeke umuhle.
nge Izitudiyo zeLionshead
Ithiphu # 1: Thatha i-Essence Yezemidlalo Yakho
Yonke imidlalo ingahlanjululwa izehlakalo ezimbalwa ezisebenza ukuchaza lo mdlalo uqobo. Kungenzeka ukuthi ingqikithi yayo izungeze isenzo esithile lapho inkokhelo ingaba nenkinga yokuqedela ngempumelelo. Le micimbi egcwaliswe ngamakhono iyindawo efanelekile yokuqala uhambo lwakho lokuthwebula izithombe.
nge Izilwane Ezihlala Isikhathi Eside
Isibonelo, ama-cross-fitters angabonisa amakhono awo ngentambo esindayo. Ekuphakamiseni amandla, ingqikithi ingabanjwa lapho abenza izinsimbi beqala ukuqubuka futhi imisipha yabo ikhombisa ubunzima besisindo. Ukwenza izithombe zakho zokuzivocavoca zigqame kokunye, thola ingqikithi yezemidlalo yakho bese uyigqamisa.
nge Imidiya ye-9for9
Ithiphu # 2: Faka ukufiphala ukuze ugxile esenzweni
Into eyodwa cishe yonke imikhakha yokufaneleka efana nayo ukunyakaza, futhi kwesinye isikhathi kungaba yinkohliso ukulawula lokhu kuhamba ezithombeni zakho. Uma usebenzisa i-DSLR, zama ukuyifaka kumodi yezandla ukuze ukwazi ukulawula isivinini se-shutter nokuvula. Uma ushutha izithombe zakho ku-smartphone, qiniseka ukuthi uhlelo lokusebenza olisebenzisayo likuvumela ukuthi ulawule nalezi zinhlaka.
nge I-Aqua Blue Sport
Lokhu kungathatha isivivinyo nephutha, kepha inhloso yakho ukusetha isivinini sakho se-shutter ukuze ukunyakaza okuyinhloko kufiphaze kancane. Qaphela ukuthi sonke isithombe sigxile kakhulu. Ngokwenza njalo, ungangeza isenzo nokunyakaza kwesinye isithombe esimile.
Mhlawumbe ungathola ukuthi ijubane eliphelele le-shutter elivumela imilenze yomgijimi ukuthi ifiphalaze kancane, kugcizelela ukunyakaza kwabo, kanti ubuso nomzimba womgijimi muhle futhi ubukhali. Noma kuthiwani ngokuvumela amasondo omgibeli webhayisikili afiphale ngejubane? Kuningi ongakwenza ngokufiphaza okukhethiwe, ngakho-ke zinike isikhathi sokuzama ukuthola imiphumela emihle kakhulu.
Ithiphu # 3: Hlela Phambili & Prakthiza I-Shot Yakho
Izithombe ezinhle zokuzivocavoca azenzeki ngengozi. Ukuze uthole okuningi kusithombe sakho, qiniseka ukuhlela kusengaphambili. Lokhu kusho ukudlula ekhanda ekhanda lakho, uzama ukucabanga ngakho konke okuguqukayo okungakudalela inkinga bese uthola ukuthi ungazigwema kanjani izinkinga ezinjalo.
Lokhu kungasho ukuletha ukukhanya kwakho noma ukukhanya kwekhamera uma ngabe isigcawu asinikezi ukukhanya okwanele sisodwa, njengasosukwini olunamafu. Noma izingubo zokushintsha ukuze ingubo ingathelwa ngamanzi ngomjuluko. Qiniseka ukuthi wakhe uhlelo lwezimo ezizokusiza ukuthi uthole ukutholwa okulungile.
Amathuba akho okuthola ukudubula okuphelele okokuqala aphansi. Uma usebenza nemodeli, qiniseka ukuthi usivivile isibhamu sakho ngaphambi kwesithombe, ukuze ugxile ekuthatheni isithombe, hhayi ukuthi uzosithwebula kanjani ngenkathi imodeli yakho ilindile.
I-Batman Photobomb nge MeatheadMilitia
Kubalulekile futhi ukuhlola izindawo zokuthwebula izithombe zomzimba ngaphambi kwesikhathi. Yazi ukuthi ukukhanya kuzobukeka kanjani ngesikhathi sosuku ozobe ushutha ngaso. Qiniseka ukuthi unemvume yokuba lapho uma udubula impahla yangasese noma amanye amapaki nemvelo kuyalondolozwa. Qonda ukuthi impilo yansuku zonke ezungeze indawo yakho ingakuthinta kanjani ukuthwebula kwakho. Futhi akusho ukuthi, naka okukuzungezile ukuze uvikele ama-photobombers.
Amathiphu wokuthwebula izithombe # 4: Sebenzisa ama-Props ukuze ugqame
Ukuthandwa kwezithombe zokufaneleka kusho ukuthi isithombe sakho sincintisana nezinkulungwane zezinye izithombe zabasubathi ukuze zibhekwe. Kungani ungahlukanisi eyakho nezinye izinsiza? Lezi zinsiza zingasukela kubuchwepheshe obukhanyayo nobuphakeme ziye kokulula nokusezandleni.
nge Westcott U
Bheka indawo yakho yokuzivocavoca ukuze ubone ukuthi yini etholakalayo, bese usebenzisa ingqondo yakho yokudala ukuze udlale ngokuthi leyo prop ingakusithuthukisa kanjani isithombe sakho. Isibonelo, ingabe umdlalo wakho usebenzisa ushoki ukukhulisa ukubamba, njengoba benza ekukhuphukeni kwamatshe? Zama ukusebenzisa isivinini se-shutter esisheshayo ukuze ubambe inqwaba kashoki ngemuva kokushaya izandla. Ukuphefumula komsubathi wasebusika kungakhombisa umbukeli ukuthi kubanda kanjani ngaphandle!
Ezinye izinsiza zingafaka amakhanda omgijimi nomshini wentuthu womdansi. Thatha isikhashana ucabange ukuthi iyiphi i-prop engabeka isithombe sakho ngokuhlukile kokunye, bese ikwenza kwenzeke!
Ithiphu # 5: Thola i-Angle yakho
Indlela elula yokuthuthukisa izithombe zakho ukushintsha i-angle yakho yokubamba. Ungakwenza lokhu ngokuya phansi phansi ukugcizelela usayizi womsubathi, noma ukudubula kusuka phezulu ukuze ubone indawo yesehlakalo ngendlela entsha ngokuphelele. Ungesabi ukubeka phansi noma ukugibela esihlahleni. Ngeke wazi ukuthi i-engeli ingabonakala kahle kangakanani uze uyizame. Lezi zinguquko zivame ukuthatha umzamo omncane futhi ziholele ekuthuthukeni okukhulu.
nge u / Heh630
Ithiphu # 6: Hlela izithombe zakho zokufaneleka
Mhlawumbe esinye sezeluleko ezibaluleke kakhulu zokuthwebula izithombe: Kulula kakhulu ukuthola izibonelo zokuhlela okungalungile kunokuhlela isithombe esihle sempilo. Isizathu: isithombe esihlelwe kahle ngeke sibonakale sihleliwe. Ungazami ukuhlela isibambo sothando esingadingeki, ngoba lezi zinguquko azigcini nje ngokungathembeki, zivame ukubanjwa ngumbukeli.
nge I-Daily Mail, phawula ukuhlela okusobala. Ihlazo kuwe Kylie!
Gxila ekuthuthukiseni ukusebenza kwesithombe noma ngokugxila endabeni yezithombe ngokuhlela kwakho. Yenza lokhu ngokuhlela umbala ezindaweni ezithile noma iguqula isithombe sakho sibe yi-3D ngosizo lweLucidPix. Izithombe eziningi eziboniswe ngenhla bezikhona wenza i-3D ngokuthepha okukodwa kuhlelo lokusebenza lweLucidPix.
Zimbalwa Izinto Okufanele Uzikhumbule Lapho Wenza Isikhathi Eside Ukuthwebula Izithombe →← Amathiphu ama-5 Wokwenza I-Baby Best Photography